1. Kune vamwe vashandisi veMac vasati vaziva kutora skrini kana kungoidaidza iyo skrini. Kune avo vari kutsvaga nzira yekutora skrini, iwe unofanirwa kuverenga chinyorwa ichi .. Nekuti kutora pikicha yeiri hwindo hwindo kana chete chikamu cheiyo skrini Hazvina kuoma sezvaunofunga! Maitiro ekutora skrini paMac Imwe yemakiyi akakosha atinofanira kushandisa ndeaya: ● raira ● chinja ● nhamba 3 ● nhamba 4 ● nhamba 6 ● spacebar panoshandiswa makiyi aya. Uye kuti ungaiwana sei neese Mac mamodheru senge Mac Pro, iMac, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini. Ngatirambei tichienderera nedzimwe nzira dzekutora screenshots. Ndeipi yaunoda kudzvanya panguva imwe chete? Uye pane chero fomati iyo yatinogona kutora screenshots?
2. Tora mufananidzo kwaunoda iwe nekugadzirisa dunhu rawo.Dzvanya uye ubatise makiyi e Command uye Shift uye dzvanya nhamba 4. Kana uchimanikidzwa panguva imwe chete, yako Mac inoratidza chiratidzo, wobva wadzvanya wobata mbeva uye uchizvuzvurudza nzvimbo yaunoda. Mufananidzo ipapo Kana nzvimbo yaunoda yapera, sunungura mbeva, inokodzera patinoda kutora imwe nzvimbo Paunonzwa kurira kwe "snap", zvinoreva kuti kubatwa kwapera. Mufananidzo wakatorwa uchachengetwa pa desktop ipapo.
3. Tora mufananidzo wewindows razvino .Kudzvanya uye kubata makiyi e Command uye Shift, tinya panhamba 4 uye osunungura maoko ese. Inoteverwa neSpacebar (+ ichaonekwa kana iwe ukasamanikidza Spacebar) paunenge uchigadzira kamera kamera. Dzvanya pahwindo raunoda kuti utore mufananidzo, unoenderana nekutora hwindo chairo rekushandisa kwese. Paunonzwa kurira kwe "snap", zvinoreva kuti kubatwa kwapera. Mufananidzo wakatorwa uchachengetwa pa desktop ipapo.
4. Tora skrini yeiyo Mac yese mune yakazara skrini Kuti uite izvi, pinda uye bata makiyi e Command uye Shift, wobva wadzvanya nhamba 3. Izvi zvinobvumidza kutora yakazara skrini kutora.Zvese zvinhu zvakavhurika pachiratidziro icho zvinoratidzwa zvizere. Inokodzera kana iwe uchida kuona iyo yakazara skrini. Paunonzwa kurira kwe "snap", zvinoreva kuti kubatwa kwapera. Mufananidzo wakatorwa uchachengetwa pa desktop ipapo.
5. Tora mufananidzo weTouch Bar paMacBook Pro iyo inouya neTouch Bar, kana paine munhu ari kushandisa MacBook Pro inouya neTouch Bar, ichave iri kumberi kumberi nekuti iyo Mac inogona kutora skrini yeTouch Bar futi !! Wow.Kudzvanya nekubata makiyi e Command uye Shift uye pinda iyo nhamba 6 kana iwe uchinzwa kurira "Snap" zvinoreva kuti kubatwa kwapera. Mufananidzo wakatorwa uchachengetwa paDesktop ipapo, imwe nzira ndeyekuti kana iwe uchida kugadzirisa mufananidzo wakatorwa ipapo, unogona kuzviita kana cap yapera, nekuti iyo Mac inotiratidza mufananidzo isu usati wauchengeta kuDesktop. Kana iwe uchida kunyora kana kuda kumaka akakosha mapoinzi Inogona kugadziriswa ipapo ipapo, zvakanyanya nyore kune chero munhu anoda kuziva mamwe maitiro ekushandisa Mac, usakanganwa kudzvanya nekutevera pamwe chete. Iva nechokwadi chekuti une miitiro yakawanda yakanaka!